Nigeria na-enye ndị njem ụgbọ elu mba ofesi ohere ị nweta ọgwụgwọ COVID-19 n'efu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Na -eme Nigeria » Nigeria na-enye ndị njem ụgbọ elu mba ofesi ohere ị nweta ọgwụgwọ COVID-19 n'efu
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • Akụkọ Na -eme Nigeria • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Dịka akụkụ nke onyinye ya maka ikpochapụ ọrịa ụjọ Corona na-efe efe na Nigeria, Reddington na-enye ọgwụgwọ niile maka ndị njem ụgbọ elu mba ụwa niile na-abata na Nigeria na newlylọ Ọrụ Ahụike Armored Shield a nyere ọhụrụ na-enye PCR ule a na-eme na Reddington Zaine Laboratory, nke bụ nke Reddington Hospital Group kwalitero na nso nso a ka akwadoro ya dika onye ozo Covid-19 ụlọ ọrụ iji nwalee ma gwọọ ndị ọrịa na Nigeria.
Nkwupụta sitere na njikwa nke Reddington kwuru na ebe a ga-atụpụta nsonaazụ nke ọtụtụ ule na ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma, ma ọ bụrụ na a ga-enwe nyocha COVID-19 dị mma, ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ndụmọdụ ndị dọkịta n'efu, X-ray ma ọ bụ CT Scan, ụlọ mwepu iche na mbelata 50% nke ọgwụgwọ ụlọ ọgwụ na Armored Shield Medical Center.
Dọkịnta Olusola Oluwole, onye isi ahụike nke Armored Shield Center na Reddington ZaineLab kọwara na iji tozuo maka ọrụ ọgwụgwọ n'efu, ndị njem ụgbọ elu mba ụwa niile ga-ahọrọ ma debanye aha Reddington ZaineLab dị ka ụlọ nyocha kachasị amasị ha maka ule PCR ha na Portal njem NCDC na akwụkwọ mbata. mgbe a ga-eme nyocha PCR na ụbọchị 7 nke mbata na Nigeria. O kwuru na emeghela ebe a na-anakọta ihe atụ na 26 Joel Ogunnaike n'okporo ámá, GRA Ikeja na-agagharị na akụrụngwa maka ndị nọ na oke ala na 6B Bendel Close off Aboyade Cole Street, Victoria Island maka ndị nọ na Island, ebe nchịkọta ihe nchịkọta na ụlọ ọrụ Lekki ga-anọ n'ọhụhụ. Dika Dọkịnta Oluwole si kwuo, emeela nhazi pụrụiche maka ịnakọta nchịkọta n'ụlọ maka ndị VIP na-achọ.
Reddington ZaineLab nke kọmishọna na-ahụ maka ahụ ike na Lagos Steeti bụ Ọkammụta Akin Abayomi, ji ọrụ wee nwee ọkaibe klasị 3 Biosecurity Safety Technology nke na-ewepụta nsonaazụ n'ime elekere 24.
Dr. Oluwole kwuru na ụlọ ọrụ ahụ bụ naanị ụlọ ọgwụ na-ahụ maka onwe ya na Lagos ugbu a kwadoro maka Ule na ọgwụgwọ nke COVID-19. “Nke a na - enye ohere maka ọgwụgwọ na njikwa enweghị nsogbu nke ndị ọrịa niile COVID-19 nwere ọnọdụ dị mma na ebe dị iche iche na Lagos n’okpuru gburugburu Biosecurity,” ka ọ kọwara.
O kwuru na ụlọ ọrụ ahụ ike nwere ụlọ ọrụ dị ka ụlọ ọrụ iche iche nke kpakpando ise, ntụkwasị obi dị elu na Ngalaba Nlekọta Nlekọta Nlekọta 3 (ICU) na ndị na-ahụ maka ikuku, igwe na-akwado ndụ, CT Scan, X ray, laabu, telemedicine, ihe mberede ambulances n'etiti ngwaọrụ ndị ọzọ. na ndị ọrụ ahụike mara oge chọrọ ịgwọ okwu niile nke COVID-19 ma okenye ma ụmụaka.